Kooxda Barcelona oo war farxad leh ka heshay xarunta tababarka kahor kulanka Granada – Gool FM
Kooxda Barcelona oo war farxad leh ka heshay xarunta tababarka kahor kulanka Granada
Dajiye February 1, 2021
(Barelona) 01 Feb 2021. Tababaraha kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa ku helay war farxad leh tababarkii maanta ay Blaugrana isugu diyaarineysay kulanka Granada ee wareega siddeeda ee tartanka Copa del Rey.
Barcelona ayaa marti ku noqon doonta garoonka Granada ee Nuevo Estadio de Los Cármenes, habeenka Arbacada soo socota, iyagoo raadinaya inay helaan saddexda dhibcood si ay ugu gudbaan wareega xiga ee afar dhamaadka.
Wargeyska “Sport” ayaa soo wariyay in kooxda Barcelona ay ku soo laabatay tababarka subaxnimadii maanata ee Isniinta, waxaana tababarka lagu arkay ka qeyb qaadashada dhamaan ciyaartoyda koowaad ee kooxda uu heli karo Ronald Koeman.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in tababarkii maanta lagu dhex arkay soo laabashada Sergiño Dest, wuxuuna tababarka la qaatay kooxda inteeda kale.
Wargeysku wuxuu tilmaamay in Sergiño Dest uu ku biiri karo liiska Barcelona ee kulanka Granada, ama kulanka Real Betis ee horyaalka Spain Isbuuca soo socda.
Sergiño Dest ayaa dhaawac uu ka soo gaaray finalkii Spanish Super Cup oo ay la ciyaareen Athletic Bilbao 17-ka bishii January, taasoo ka dhigtay inuusan ka qeyb galin kulamadii la soo dhaafay oo dhan.
Neymar Jr oo ka hadlay Mustaqbalka Kylian Mbappe ee PSG & Haddii uu laftiisu sii joogayo Kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska
“Bixitaanka Messi ma noqon doonto dhamaadka adduunka.” – Musharaxa madaxweynaha cusub Barcelona